Waldiddaan filannoo Keenyaa itti aanu maal ta'uu mala? - BBC News Afaan Oromoo
Waldiddaan filannoo Keenyaa itti aanu maal ta'uu mala?
Goodayyaa suuraa Deeggartoonni Raayilaa Odiingaa qondaaltota Komishinii filannoo mormu
Manni murtii Olaanaa Keenyaa dorgomtoonni filannoo pirezidaantummaa irratti Hagayya darbe hirmaatanii turan hundinuu kan irra deebii dhuma baatii kanaa keessattis hirmaachu akka danda'an murteesseera.
Kunis kan dhagahame erga dorgomaa cimaan paartii mormituu, Raayilaa Odiingaa akka hinhirmaanne beeksisan booda ture.
Filannoo irra deebiin kunis kan ajajamees mana murtii olaanaa, isuma filannoon Hagayyaa pireezidaanti Uhuuruu Keenyaataan mo'atame walfakkeenya kan hinqabneefi seera qabeessa akka hintaane eeruun haqeen ture.
Garuu Obbo Odiingaanis wanti jijjirame tokkolleen hinjiru. Kanaafuu filannoo haaraadhaanis dogoggorri walfakkaataan uumamuu danda'a jedhu.
Karaa biraatiin ammoo, paarlaamaan biyyattii seera filannoo irratti jijjirama garaa garaa, kan mormitoonni balaaleefatan taasiseera.
Filannoon irra deebii wayi gaggeeffamaa?
Image copyright Presidential Press Service/Reuters
Goodayyaa suuraa Uhuruu Keenyaataan ammas deeggartoota horachuuf duularra jiru
Akka heera motummaatti, Sadaasa 1 tti gaggeeffamuu qaba.
Ajaja mana murtii ammaa jechuunis, yoo hundumtuu kan ofi baasan ta'een alatti, Odiingaan ofi ala taasisuulleen, Uhuruu Keenyaataan ammas morkattoota cimaatu isa eeggata.
Gama Keenyaataatiin yoo ilaalamus, kunis filannichaaf amanamummaa muraasa ni kennaaf. Warri kaan sagalicha keessaa dhiibbeentaa 1 gadi kan argatan yoo ta'elleen, Obbo Keenyaataaf garuu carraa irra deebin filatamuu ni kennaaf.
Jalqabas, irra filannoon irra deebiin kan gaggeeffamu sababii pireezidaanti Keenyaataa kan sagalee % 54 fi Odiingaa %45 argataniif ture.
Odingaan filannoo pirezidaantummaa Keenyaa keessaa of baasan
Obbo Odiingaan maaliif of baasan laata?
Dhaabni isaanii NASA akka jedhetti, haalli filannoo seera qabeessummaa isaa hinguutamne. Komishiiniin Filannoo Walabaafi Daangaawwanii (IEBC) akka ofi fooyyeessuuf yeroon kennamuufii qabaata.
Wantoota NASAn barbaadu keessaa:
Qondaaltoota filannoo Hagayya 8 muxannoo dhabiinsaan itti gaafatamoo turan hari'uu
Kubbaaniyaa waraqaa filannoo maxxanseefi filattottaaf meeshaa mirkanneessaa dhiyeesse akka geeddaramu
Akka sirnawwan IT to'achuun bu'aalee hinhatamne gochuuf ogeeyyiin idil addunyaa IEBC waliin akka hojjataniif kan jedhan fa'itu ture.
IEBC irratti jijjiramni taasifame wayii ni jiraa?
Erga filannoo pirezidaantummaa haqameetiin boodas, dura taa'aan IEBC Waafulaa Chebukaatii, garee isaanii irratti jijjirama akka taasisan waadaa galanii turan. Garuu komishinaroota biraa irraa diddaan aak isa mudate amanama.
Goodayyaa suuraa Filannoo duraan Keenyaataan sagalee %54, Odiingaa ammoo %45 argatan
Obbo Chebukaatiinis garee addaa filannoo irra deebii gaggeessan muudaniiru. Ta'us garuu haala attamiin komishiinii hafee waliin akka itti hojjatan ykn humnisaanii hangam akka ta'e ifa miti.
IEBCs kubbaaniyaa duraan meeshaalee filannoo dhiyeesse waliin waliigalteen dirqama qabaachusaa fi kana haqu akka hindandeenye dubbateera.
Erga Odiingaan dorgommicha keessaa bahusaa ifa taasiseen booda, komishinichis haala adeemsa gara fuula duraarratti garee seeraa isaa, gorsa akka gaafatu dubbate.
Paartiin Obbo Keenyaataa hoo maal jedha?
Paartiin bulchaa jiru Jubiliin filannoo irra deebii ittan fufaa jedheera.
Goodayyaa suuraa Deeggartoonni Obboo Keenyaataa mana murtii irratti mormii guddoo dhageessisan
Jijjirraa seera filannoo wal mormisiisaas caalmaa sagalee paarlaamaa keessatti qabutti fayyadamuun raawwachiise. Kunis, haala to'annoo bu'aa filannoo irratti taasifamu ni dhorka ta'a jechuun soodaa uumeera.
Jijjiramichi kan hammatus:
•Qaamni gara fuula duraatti bu'aa filannoo irratti komii qabaatu kami iyyuu walitti fakkeenya dhabummaa inni cabsu isaa irraatti ragaan mirkanneessu akka gaafatamu.
•Ulaalgaalee dura taa'aa IEBC kan muxannoo akka abbaa seerummaa, abukaatummaa ykn oggeessa barnootaatiin waggoota 15niif qabaachu qaba jedhu dhiisuu. Qeeqixoonnis kun haala ittiin dura taa'aa ammaa jiru nama paartii bulchuuf hirriyyaa ta'een bakka busuuf jedhamaa jira.
•Ogganaan IEBC sagaleen hinlakkaa'amiin jijjirama kan uumu yoo ta'e malee, dorgommii pireezidaantummaa keessatti akka nama mo'atee akka ifa taasisuuf beekumsa kenna.
Jijjirraan irratti waliin hingalamiin taasifame kunis, mormotoota, ogganttota amantaa, gareewwan mirgootaa, Ameerikaa fi UK dabalatee dippilomaatota warra lixaa fi komishiinii filannootiin bal'inaan qeeqameera.
Goodayyaa suuraa Filannoo irra deebiirra hiriira dheeraa akkasii wayi agarraa?
Akka isaani jedhanittis, jijjirraan taasisfame guyyaa filannootti kan dhiyaateefi qophiilee filannoof taasifamu waliin sirriitti wal hinsimne.
Jijjiramichi ganaa hojiirra hinolfamne garuu Pireezidaanti Keenyaataan akka seera qabeessa ta'uuf nan mallateessa jedhaniiru.
Paartiin Jubileen jijjiramichi ''rakkooleen turaniitti sireeffame'. Innis kan filanni Hagaayyaa haqiinsaaf saaxileedha jechuun mormu.
Itti aansee waan ta'uu malu?
Osoo hiriiraa NASAn dhaadannoo 'bakka jijiramni hin jirreetti, fialannoon hinjiraatu', jedhuun gaggeessaa jiru, Paartiin Jubileen duula na filadhaa isaatiin yoo itti fufe, jeequmsi ammas uumamuu mala soodaa jedhutu jira.
Filannoo Waliigalaa Keeniyaa bara 2017
Filannoo Keenyaa: Dorgomaa cimaa Raayilaa Odingaan filannoo pirezidaantummaa hin hirmaadhu jedhan
10 Onkololeessa 2017
Keenyaa: Manni Murtii Olaanaa Komishinii Filannoo qeeqe
Filannoo Keenyaa: Keenyaataa fi Odingaan irra deebiin wal falmuufi
5 Fuulbana 2017